Kawaran haddii kamaradda iPhone 11 Pro aysan dhaafi karin? | Wararka IPhone
Kawaran haddii kamaradda iPhone 11 Pro aysan dhaafi karin?
Waxaan eegay naqshadaha iPhone 11 ee soo socda bilooyin, iyo dhammaantood waxay isku raaceen in lagu daro kamarad saddex-geesle ah oo taagan gadaasha isla isla aagga "jasiirad" laba jibbaaran, taas oo siinaysa muuqaal aan dadka oo dhami u muuqan inay qancinayaan. Si kastaba ha noqotee, toddobaad ka dib soo bandhigida moodooyinka cusub ee iPhone, sawirrada qaar ayaa hadda soo muuqday oo wax walba beddeli kara.
Waxay ku daabaceen Ben Geskin barta Twitter-ka (@BenGeskin), waxay ka yimaadeen sawirrada saxaafadda ee sumcad caan ah oo dabool leh oo uusan magacoodu rabin inuu sheego, iyo Waxay na tusayaan iPhone 11 Pro iyo iPhone 11 oo leh naqshad aad uga duwan wixii aan ku baran jirnay.. Ma rabtaa inaad aragto? Dhamaantiin hoosta ayaan idinka tusaynaa.
Labadan sawir ee ugu horreeya ee aad arki karto waxay u dhigmaan kiisaska iPhone 11 Pro, oo ay ku jiri doonaan kamaradda saddex-geesoodka ah ee aan in badan ka hadlaynay. Si kastaba ha noqotee, goynta kiiska kamaraddu waxay ina tusaysaa ujeedo saddex-geesood ah oo ka duwan tii aan illaa hadda aragnay, leh geesaha macdanta (qalin ama madow iyadoo ku xiran midabka barta) waxayna u muuqataa in iyadoo aan laga soo bixin dhabarka iPhone, wax dad badan oo adeegsada u sacab tumayaan.
Kiiska loogu talagalay iPhone 11 (bedelka XR) wuxuu na tusayaa naqshad kale. Xaaladdan oo kale kaamirooyinku waxay ku dhagan yihiin dhabarka, waxaan kaliya haysannaa laba muraayadaha indhaha oo isku bir ah, iyo jasiiradda dhexe waxay leedahay gees ciriiri ah oo xusuusinaysa iPhone 7 Plus, inkasta oo aad looga xoojiyay iPhone-kan cusub. Waxaa laga yaabaa in wax walba aan la arkin oo bisha Sebtember ee soo socota 10 waxaan ka heli doonnaa wax ka badan hal la yaab oo ah naqshadeynta iPhone-ka oo ka muuqda shaashadda weyn ee tiyaatarka Steve Jobs.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Noticias » Kawaran haddii kamaradda iPhone 11 Pro aysan dhaafi karin?
Hagaag, hadii kamaradu aysan dhajin, waa wax kale iyo si gaar ah, tusaalaha cad ee ka muuqda maqaalka igama xumaanayo gabi ahaanba. Waan arki doonnaa haddii Apple ay la yaabtay naqshadeynta ...
Sida loo isticmaalo Istaraatiijiyada Memoji ee iOS 13
Xiaomi's Yeelights waxay hadda la jaan qaadayaan Apple's HomeKit